သူဟာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး နည်းပြမဟုတ်ဘူး လို့ ဖွင့်ဟသွားတဲ့ ဂွာဒီယိုလာ - MySport Myanmar
သူဟာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး နည်းပြမဟုတ်ဘူး လို့ ဖွင့်ဟသွားတဲ့ ဂွာဒီယိုလာ
ဘာစီလိုနာအသင်း ၊ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်း ၊ မန်စီးတီးအသင်းတို့နဲ့အတူ ဆုဖလားပေါင်း များစွာကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့တာကြောင့် ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံးနည်းပြတစ်ဦးအဖြစ် သတ်မှတ် ခံနေရတဲ့ အသက်၄၉နှစ်အရွယ် စပိန်လူမျိုး နည်းပြဂွာဒီယိုလာကတော့ သူဟာ ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံးနည်းပြ မဟုတ်ပါဘူးလို့ ဖွင့်ဟလာခဲ့ပါတယ်။
ရောက်လေရာအသင်းတိုင်းမှာ တူညီတဲ့ ကစားဟန်ကို တည်ဆောက်ကာ ဆုဖလားတွေကို သိမ်းပိုက်လေ့ရှိတဲ့ ဂွာဒီယိုလာကို ဘောလုံဒပရိသတ်တွေက ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးနည်းပြ အဖြစ် ရှုမြင်နေကြတာဖြစ်ပေမယ့် ဂွာဒီယိုလာကတော့ နည်းပြကောင်းတစ်ဦးသာ ဖြစ်ကာ အသင်းကောင်းတွေကို ကိုင်တွယ်ရလို့ ရလဒ်ကောင်းတွေ ရတာပါ လို့ ဝန်ခံစကားဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။
သူဟာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးနည်းပြလားဆိုတ​ဲ့ မေးခွန်းအပေါ် ဂွာဒီယိုလာက ” ကျွန်တော် က ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးနည်းပြပါလို့ တစ်ခါမှ မခံစားရဖူးဘူး။ ကျွန်တော် ဘာစီလိုနာနဲ့ ဖလားခြောက်လုံးကို တစ်နှစ်အတွင်း ရခဲ့တယ်။ ဆုဖလားတွေအများကြီးရတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့လိုခံစားချက်မျိုး မရဘူးဗျ။ ကျွန်တော်က အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ ကစားသမားတွေကို ကိုင်တွယ်ခွင့်ရခဲ့တာကြောင့် ဆုဖလားတွေရခဲ့တာပါ။ အကောင်းဆုံးအသင်းတွေမှာ ရှိမနေတဲ့ ထက်မြက်တဲ့ နည်းပြတွေ အများကြီး ရှိပါသေးတယ် ” လို့ ဖွင့်ဟသွားခဲ့တာပါ။
Photo Credit:Sky Sports.com
ကဲ ပရိသတ်ကြီးရဲ့ အမြင်ကရော….? ဂွာဒီယိုလာဟာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးနည်းပြလား… ဒါမှမဟုတ် ဘယ်သူကရော ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး နည်းပြလဲ…?
MySport Myanmar2020-02-13T07:47:53+06:30February 13th, 2020|Bundesliga, Football, La Liga, Premier League|